महिनाको बिजुलीको बिल एक लाख आएपछि अरशदले गरेको यो हर्कत्...
कोरोनाभाइरसका कारण लकडाउन भएपछि सबैले घरमा नै समय बिताउन पर्दा केहीको यो समयमा बिजुलीको बिल बढी आएको हुनुपर्छ । उता, बलिउडका कलाकारहरुलाई पनि यस्तै भएको छ । यही कारण उनीहरु चिन्तित भएको समाचार पनि बारम्...
के तपाईंले ताराकाे संख्या गन्ने प्रयास गर्नुभएकाे छ ? कति हाेला ?
हामी रातमा आकाशमा धेरै तारा देख्छौँ, हाम्रो मनमा सधैँ एउटा जिज्ञासा उठिरहन्छ । त्यो हो, आखिर ब्रह्माण्डमा कति तारा होलान् त ? वैज्ञानिकहरूले पृथ्वीमा जति समुद्री तट छन् । त्यसमा जति बालुवाका कण छन्, त्यति नै सं...
हात्तीले किन आफ्नो शरीरमा पानी फाल्छ
सायद हामी सबैले हात्ती देखेकै छौँ । र हात्तीले सुँडले आफ्नो शरीरमा पानी हालेको पनि देखेकै छौं होला । तर हात्तीले किन यसरी आफ्नो शरीरमा पानी हाल्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । स्विट्जरल्यान्...
बिरालो किन म्याउँ गर्छ ? प्रश्न सामान्य छ, तर जवाफ सामान्य छैन । जब बिरालोलाई हामी मायाले चलाउँछौँ तब ऊ म्याउँ गरेर आफ्नो खुसी व्यक्त गर्छ । तर, बिरालोले म्याउँ गर्नुको रहस्य यति मात्रै होइन । प...
एक हजार पेट्रोलपम्पको आवेदन रद्द
इंग्लिस प्रिमियर लिगः एर्भटनमाथि वोल्भ्सको सहज जित